सरकारले लगायो सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध, अव के हुन्छ ? — Motivatenews.Com
सरकारले लगायो सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध, अव के हुन्छ ?
काठमाडौं – श्रीलङ्कामा शृङ्खलाबद्ध विस्फोटनको केही समयपछि मिथ्या समाचार फैलिन थालेपछि सरकारले समाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने कठोर निर्णय गरेको छ ।
मिथ्या समाचारलाई फैलनुबाट रोक्न फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, युट्युब, स्न्यापच्याट र भाइबरमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । सरकारले त्यो प्रतिबन्ध कहिले हट्छ भनेर बताएको छैन । तर यो प्रतिबन्ध यस्तो समयमा आएको छ जुन समयमा सामाजिक सञ्जालहरू मिथ्या समाचार र मिथ्या समाचारको बाढी रोक्न असफल भइरहेका छन्।
प्रतिबन्ध किन ?
आइतवारको आक्रमणमा तीन सयभन्दा धेरैको ज्यान गएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घले नागरिकहरूलाई ुअप्रमाणित समाचार र अनुमानु नफैलाउन अनुरोध गरेका थिए।
त्यो आग्रहपछि सरकारले समाजिक सञ्जालमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। सरकारले प्रतिबन्ध अस्थायी भएपनि अनुसन्धान नसकिएसम्म रहने बताएको छ। ट्विटरमाथि भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन। विज्ञहरूका अनुसार ट्विटर अन्य समाजिक सञ्जालजति चर्चित छैन।
तर श्रीलङ्कामा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको यो पहिलो पटक भने होइन। एक वर्षअघि मुस्लिम समुदायमाथि हिंसा बढेको बेला फेसबुकमाथि केही समय प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
गएको नोभेम्बरमा फेसबुकले म्यान्मारमा हिंसा फैलाउन आफ्नो प्रयोग भएको बताएको अवस्थामा श्रीलङ्काली सरकारको यो कदम आश्चर्यजनक भने नहुन सक्छ। गत मार्च महिनामा पनि न्यूजिल्यान्डमा भएको मस्जिद आक्रमणको भिडिओ हटाउन फेसबुकलाई हम्मेहम्मे परेको थियो।
न्यूजिल्यान्डको आक्रमणको प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुकमा गरिएको थियो भने त्यो भिडिओ अनगिन्ती पटक सामाजिक सञ्जालमा राखिएको थियो जुन हटाउन फेसबुक, ट्विटर र युट्युबले रातदिन मेहनत गरे पनि पूर्ण सफल भएका थिएनन्।
२०७६ बैशाख १२ गते प्रकाशित